← Zomi National Day	Celebration of ‘Chin National Day’ Banned in Chin State →	Eggs and Sprite အားဖြစ်တယ်ဆိုလို့	Feb 24
Carbonated water ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပါ ရေကြောင့် သွားကိုတော့ သိပ်မထိခိုက်စေပါ။ သူ့ထဲမှာပါတဲ့ (ဖေါ့စဖိတ်) ကြောင့် အရိုးကို ထိခိုက်စေမှာလဲ မပြောပလောက်ပါ။ European Journal of Gastroenterology and Hepatology ကနေပြောတာက အစာမကျေဖြစ်တာ သက်သာစေတယ်၊ ၀မ်းမချုပ်စေဘူးတဲ့။ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာ စားလိုက် သောက်လိုက်တဲ့ (ဆူးခရို့စ်) ကို (ဂလူးကို့စ်) နဲ့ (ဖရပ်တို့စ်) အဖြစ် ပြောင်းပြီးမှ အူကနေ စုပ်ယူပါတယ်။ ရိုးရိုးသကြားကိုလဲ အဲလိုပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ Fructose Metabolism (ဖရပ်တို့စ်) ဓါတ်ပြောင်းဖြစ်စဉ် ဆိုတာ အလွန်မြန်လို့ Fatty acid (ဖက်တီး-အက်စစ်) နဲ့ Triglyceride (ထရွိုင်-ဂလစ်ဇရိုက်) ဖြစ်တာ အသဲမှာ မြန်-များလို့ အဆီတွေ လာစုစေတယ်။ အရက် မသောက်သူတွေမှာပါ Fatty liver disease အဆီဖုံး-အသဲရောဂါ လာဖြစ်စေနိုင်တယ်။
Dr. တင့်ဆွေ Like this:Like Loading...
Posted on February 24, 2011, in Cimphawng/Tuahkhak teng and tagged health. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.	← Zomi National Day	Celebration of ‘Chin National Day’ Banned in Chin State →	Leaveacomment